राज्यव्यवस्था समितिको बैठकमा किन पत्रकारहरुलाई प्रवेश निषेध ? – www.agnijwala.com
राज्यव्यवस्था समितिको बैठकमा किन पत्रकारहरुलाई प्रवेश निषेध ?
अग्निज्वाला /काठमाडौं । राज्यव्यवस्था समितिको बैठकमा आजपनि पत्रकारहरुलाई प्रवेश निषेध गरिएको छ । केही सयमदेखि थाती राखिँदै आएको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामाथि छलफल गर्न बसेको बैठकमा प्रवेश निषेध गरिएको हो ।
यअघि विधेयकमा समेटिएका केही विषय विवादित भएपछि त्यस सम्बन्धमा टुंगो लगाउन बिहिबार प्रतिनिधिसभाको हलमा बिहान ११ बजेदेखि बसेको हो । यसअधि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव लक्ष्मण मैनालीको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय समिति बनाएर विवादित विषयको अध्ययन गरेको थियो ।
सचिव सम्मिलित समितिले संघीय निजामती सेवा ऐनमा समेट्नुपर्ने थप विषय र विवादित भएका विषयमा छलफल गरे पनि खासै निष्कर्ष भने निकाल्न सकेका थिएनन् ।
सरकारले विधेयकलाई संसद्मा पेस गर्ने गृहकार्य अघि बढाए पनि सो विधेयकमा समेटिएका कतिपय प्रावधान विभेदकारी र संविधानविपरीत रहेको भन्दै अधिकृतस्तरका कर्मचारीहरू असन्तुष्ट रहँदै आएका छन् ।